Ezempilo – SIVUBELAINTUTHUKO
Intatheliyephephandaba Ukudla nezindlu kunesidingo esikhulu kulabo abakhahlanyezwe yizikhukhula zakamuva kepha izinsiza zokwelapha nazo zibaluleke kakhulu. Yingakho ushayelwe ihlombe umnikelo kaDkt Nondumiso Mzizana weSikelela Medical and Dental Suppliers (PTY) Ltd awukhiphele izisulu zezikhukhula. Le nkampani inikele ngezinsiza zokwelapha zenani elingaphezulu kwesigidi esi-R1 (million), izingubo zokulala, Izifonyo, amagilavu,, ifenisha, amalaptop amabili, izi-R100 000, amanzi asemabhodleleni nokunye okuningi. Amukela lo mnikelo […]
TSEPO MOTLOKOA UMNYANGO wezokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal sewuchome uphaphe legwalagwala osonhlalakahle abangaphansi kwawo ngomsebenzi omqoka abawenzela isizwe nanokugcina inhlalakahle emphakathini. Ekhuluma emgubhweni wokubungaza osonhlalakhle uNkk Nonhlanhla Khoza ophathiswe lo mnyango esifundazweni eseRichard’s Bay Chamber of Commerce and Industries uthe kuyathokozisa ukubona osonhlalakahle besebenza ngokuzikhandla emsebenzini ababizelwe kuwona. U-March sewaba yinyanga eyahlonzwa uhulumeni njengeyokuqhakambisa iqhaza losonhlalakahle lapha […]
UMASIPALA USINGATHE UMKHANKASO I-SHE CONQUERS
Umbiko wekhasi likaFacebook (KwaMaphumulo) Izwe laseNingizimu Afrika elinesibalo esiphezulu se-HIV/AIDS phakathi kwabesifazane abasebasha namantombazane. UMasipala wakwaMaphumulo uhlanganyele nezinye izinhlaka zikahulumeni abaphethe impi yokulwa nalolu bhubhane mhla ubambe umkhanso i-SHE CONQUERS mhlaka -22 kuNhlolanja ka-2022, eHholo loMkhandlu kaMasipala. Abesifazane ezweni lonke manje sebenegama lomkhankaso kazwelonke wokuvimbela i-HIV kumantombazane nabesifazane abasebasha owethulwe uMongameli wezwe uCyril Ramaphosa ngonyaka […]